at 6:05 PM Labels: အကြော်အလှော်
ငါးကို အပေါ်ယံက ရှိတဲ့ အခွံမာတွေ လှီးပစ်ပါ။ ဆူးတောင်တွေကိုလည်း ခုတ်ပစ်ပါ။ ငါးဗိုက်ကို ခွဲထုတ်ပြီး အထဲက ကလီစာတွေ ထုတ်ပစ်ပါ။ ငါးဦးခေါင်းပိုင်းကိုလည်း ဖယ်ရှားပစ်ပါ။ ပြီးရင် ငါးကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ရေစစ်ပေးထားပါ။ ငါးအကောင်ကြီးရင် ငါးကို အလယ်ရိုးမပါရလေအောင် အလျားလိုက် လှီးပြီး အရွယ်တော် အပိုင်းလေးတွေရအောင် ပိုင်းပေးပါ။ ပြီးတော့မှ ငါးတွေကို ဇလုံတစ်လုံးထဲထည့်ပြီး နနွင်းမှုန့်၊ ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန့်၊ ငံပြာရည်တို့နဲ့ နယ်ပေးထားပါ။
ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ချင်းတို့ကို အခွံနွှာ၊ ညက်အောင်ထောင်းပြီး အရည်ညှစ်ယူပါ။ ငရုတ်သီးအခြောက်အပုပွတောင့်ကို အညှာခြွေ၊ အစေ့ထုတ်၊ ရေနွေးနဲ့စိမ်ပြီး ညက်အောင်ထောင်းပါ။ ပြီးရင် ငရုတ်သီးအနှစ်ရအောင် ယူပါ။ သံပုရာသီးကို အစိတ်လေးတွေ စိတ်ပေးထားပြီး သံပုရာရည် ညှစ်ယူထားပါ။ နယ်ထားတဲ့ ငါးတွေထဲကို ချင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူရည်၊ ငရုတ်နှစ်၊ သံပုရာရည်တို့နဲ့ သမအောင် ရောနယ်ပေးပါ။ လက်ပူမှာစိုးရတဲ့အတွက် တစ်ခါသုံး ပလတ်စတစ်လက်အိတ်ဝတ်ပြီး ငါးထဲ အရသာဝင်အောင် နယ်ပေးပြီး နာရီဝက်၊ တစ်နာရီလောက် နှပ်ပေးထားပါ။
အားလုံးအသင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် မီးဖိုပေါ် ဒယ်အိုးတင်၊ ဆီထည့်၊ ဆီပူလာရင် ငရုတ်သီးအခြောက်တောင့်လေးတွေကို မီးအသင့်အတင့်နဲ့ကြော်၊ ငရုတ်သီးကြော်ရပြီဆိုရင် ဆယ်ထားလိုက်နော်။ ပြီးတော့မှ ဆီအိုးထဲကို နနွင်းမှုန့်လေးခပ်ပြီး ကြက်သွန်နီကြော် ကြော်ပေးပါ။ ကြက်သွန်နီကြော်တဲ့အခါ မီးအသင့်အတင့်နဲ့ ကြက်သွန်တွေအားလုံး ဆီထဲမှာ အကျက်ညီအောင် ကြော်ပေးပါ။ ကြက်သွန်နီတွေ ရွှေဝါရောင် သန်းလာတဲ့အခါ ဆယ်ယူ၊ ဆီစစ်ပေးထားပါနော်။
ကြက်သွန်ကြော် ကြော်ပြီးတဲ့အခါ ငါးကြော်ဖို့ ဆီခပ်များများထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ် ဒယ်အိုးတည်ပါမယ်။ ဆီပူလာတဲ့အခါ ငါးတွေကို တစ်တုံးနဲ့တစ်တုံး မကပ်ရလေအောင် သေသေချာချာ စီပြီး ဆီအိုးထဲ ထည့်ပေးပါ။ မီးအသင့်အတင့်နဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည်ကြော်ပါ။ တစ်ဖက်က ငါးအသားမာလာပြီဆိုမှ နောက်တစ်ဖက်ကို အသာအယာ လှန်ပေးပါ။ ဆီများများထဲမှာ ထည့်ကြော်ရတဲ့အတွက် ဆီပေါက်မှာ မစိုးရိမ်ရတော့သလို ဒယ်အိုးမှာ ကပ်နေမှာကိုလည်း မစိုးရိမ်ရပါဘူး။ (တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော်။ ငါးအသားတစ်ဘက်က မမာသေးဘဲ၊ နီရောင်မသန်းသေးဘဲနဲ့တော့ ဟိုဘက်ဒီဘက် မလှန်လိုက်နဲ့။ လှန်လိုက်ရင်တော့ အသားတွေ ကြေပဲ့ထွက်ကုန်ပြီး စားကောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဆီထဲမှာလည်း ပဲ့ထွက်လာတဲ့ ငါးအသားစတွေက မဲတူးကုန်မှာ စိုးရတယ်နော်။ )
အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ချဉ်ငံစပ်အရသာလေးနဲ့ ငါးကြော်မွမွလေး ရပါပြီနော်။ လိုက်ဖက်တဲ့ ဟင်းတွေကတော့ ဗူးသီး ပုတတ်စာဟင်းခါး၊ ပဲနီလေးဟင်းချို၊ အသီးအရွက်ကြော်တို့ပါနော်။
Animal lover group September 2, 2008 at 12:51 AM
hI Lu Lu, you are doing very well. Your thread has got our forum. We are wondering if you are able to post your new cooking topics on http://mandalar.net/community/viewtopic.php?f=15&t=602&start=0&st=0&sk=t&sd=a, really appreciated. You may post only first paragraph and you can leavealink directing to your blog. By doing this, our visitors will also visitors will also come to your blog.
Anonymous September 2, 2008 at 8:28 AM
စောစောစီးစီး အိပ်ချင်လို့ အိပ်လိုက်တာ မလာလည်နိုင်
ဟင့်..ဒီရောက်တာနဲ့ သွားရည်ကျပြီ.. ဂလု..
ငါးချဉ်စားချင်တယ်... :) မြန်မာဆိုင်သွားဝယ်မှရမယ်.
လုလု September 3, 2008 at 11:34 AM
မန္တလာရေ့့့ 
ကျွန်မအနေနဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ပို့စ်တင်ဖို့တောင် အတော်လေး ခက်ခက်ခဲခဲ ရှိပါတယ်။ မန္တလာကိုလည်း ပို့စ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်မ မေးလ်နဲ့ ပို့ပေးရင် အဆင်ပြေမလားဟင့့့်  ဘယ်လိုလုပ်ရင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ်ဆိုတာလေးကို အကြံပေးပါနော်။
လုလု September 3, 2008 at 11:35 AM
၀ါဝါရေ့့့ 
ငါးချဉ်စာျးင်ရင် ငါးဖယ်ချဉ် လုပ်နည်း တင်ပေးပါမယ်နော်။
၀ါဝါတို့ မိသားစုအားလုံးလည်း အဆင်ပြေပါစေနော်။